Xeedho wireless, USB Flash Drive, Magnetic Power Bank - M-Queen
Alaabta elektarooniga ah
W09 xarkaha alwaax wareega 10W xeedho wireless
W09 waa xayeysiis xayeysiis 10W Qi-karti-u-qalma oo loogu talagalay dhammaan qalabka qi karti leh. Waxay ku habboon tahay 5W / 7.5W. Its smart IC waxay leedahay xakameynta heerkulka iyo dareeraha casriga ah ee heshiisyada wireless ee kala duwan si ay kuugu hagaajiso heerka korantada.
Caaryado gaar loo leeyahay oo loogu talagalay 22.5W Waddo laba jibbaare ah oo xeedho xaddidan 20000mah
Thanks to 20,000mAh awoodda weyn, xeedho la qaadan karo oo 20000Mah ah ayaa 5 kharaj ku geyn kara iPhone 11, kudhowaad 4 qarash oo loogu talagalay Galaxy Note 10 oo lagu daray.Qiyaasta saxda ah: 105 * 66 * 26MM .Culeyska: 316g .Qiyaasta ugu yar aduunka. kuna habboon safarka.
Bangiga Mag-Safe Power, 5000Mah Mag-Safe Charger Charger, Bangi Power Magnet la qaadan karo oo wata laba gal iyo wax soo saar, 15W Qasnadda Lacag Bixinta wireless-ka ah ee degdega ah ee iPhone 12/12 Mini / Pro / Max (Buluug)
Stick & Charge: Hal talaabo oo lagu dallacayo. Ku dhaji xeedhokan la qaadan karo dhabarkaaga taleefankaaga casriga ah, ka dibna si ku-meel-gaar ah ugu-dallacaya qalabkaaga iyada oo aan fiilooyin lahayn.
12 koobabka shaqsiyadeed ee shakhsiga ah waxay u hoggaansamaan inta badan kiisaska taleefanka si fudud - hubi inay leeyihiin dusha sare oo siman / ama qaadista kiisaska taleefankaaga. Weligaa dhib kuma noqon doontid adoo haysta bangi xoog badan oo gacantaada ku jira, jeebabkaaga gelinaya ama diyaarad la raacayo.
Shenzhen M-Queen Electronics Co., Ltd. waxay ku taalaa Bao'an, Shenzhen China. Waa mid ka mid ah shirkadaha Shiinaha ee keena qalabka elektaroonigga tan iyo 2004, waxaan ku takhasusay dhammaan waxyaabaha elektaroonigga ah: Bangiyada Awoodda; Xeedho wireless ah; USB Flash Wadayaasha; Sameecadaha dhagaha; Hadlayaal iyo inbadan. Labadeenaba waxaan nahay OEM (soo saaraha qalabka asalka ah) iyo ODM (soo saaraha naqshada asalka ah.) Waxaan kaa caawin karnaa Magacaaga.
Naqshadeynta OEM Custom logo light USB Drive
Naqshad cusub oo loogu talagalay 3D muraayad USB Drive Drive khafiif ah ...
Tayada Sare USB Flash drive saarayaasha Swiv ...